China Dogbone Mount fekitori uye vanotengesa | Qian Iye
Ichi chigadzirwa igadhibhoni gomo.
Ichi chikamu chakashongedzwa kubva kubillet 6061 aluminium kudzora kufamba kwedhiraini.
Iyi dogbone mount kana swing rutsigiro matanda anoshandiswa kumisikidza kushamiswa kweanomedza kudzikisira giya rekuchinja, kugadzirisa giya kuchinjisa mashandiro uye kuendesa simba, uye kudzikisira ruzha rwakanyanya, vibration uye zvisina kufanira.
Nyore kuisa, hapana chikonzero chekudonhedza iyo yechipiri furemu. Inoenderana nefekitori yekuwedzera furemu bracket.
Iyo imbwa imbwa gomo reDensity Line Mounts ndiwo mamiriro matsva mukunyaradza uye kuita. Makomo edu akagadziriswazve nekuita mupfungwa, uye akagadzirwa kubva kumusoro-durometer rabha yekuwedzera kuita uye kusimba, pasina kupa chibayiro kunyaradzwa. Density Line Mounts haina maturo uye haina fluid, ichibvisa iyo slop inosanganisirwa nemafekitori anokwira.
Iyo Street Density Injini Mount Pair inogadzirwa kubva makumi mashanu durometer rabha, inova ingangoita 25% yakaoma pane stock. Sezvo makomo acho zvakare asina mahara uye akasimba-akazadzwa, iyo inoguma gomo ingangoita 60% yakaoma pane stock. Iwo akakanda aruminiyamu makomo emitumbi akagadzirwazve kuti agadzirise kuwedzerwa kunetseka kwekutyaira kwemweya.
Mhedzisiro yacho yakadzikiswa kwazvo drivetrain slop, crisper shifting, uye kushomeka vhiri hop, isina chero kuwedzera kwakanyanya muruzha, kudedera, kana hutsinye (NVH) mukati mekamuri. Aya makomo inogadziriswazve mhinduro mhinduro, kwete kungoisa kwekushandisa pamwe nemakomo efekitori.
Iyo Track Density Injini Mount Pair inogadzirwa kubva makumi masere dhurometer rabha, iyo ingangoita 90% yakaoma pane stock. Sezvo makomo acho zvakare asina mahara uye akasimba-akazadzwa, iyo inoguma gomo ingangoita zana nemakumi maviri muzana yakaoma kupfuura sitoko. Iwo akakanda aruminiyamu makomo emitumbi akagadzirwazve kuti agadzirise kuwedzerwa kunetseka kwekutyaira kwemweya.
Mhedzisiro yacho yakakiiwa-pasi drivetrain, yakasimba kusuduruka, uye ingangoita isina vhiri hop. Track Density Mounts inokonzeresa kuwedzera kunoonekwa mune ruzha, kudedera, uye kuomarara (NVH) mukati mekamuri. Aya makomo inogadziriswazve mhinduro mhinduro, kwete kungoisa kwekushandisa pamwe nemakomo efekitori.
Pashure: Kubata Oiri Kunogona
Zvadaro: Turbo Muffler Bvisa